Okul konuları / विद्यालयका विषयहरु – Diyaloglar | OpenTran
Okul konuları / विद्यालयका विषयहरु – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-nepali çeviri Okul konuları / विद्यालयका विषयहरु – Diyaloglar
आदम: जुलिया, तपाईको मन पर्ने स्कूलको विषय के हो?
जुलिया: त्यहाँ ती दुई छन्: इतिहास र अंग्रेजी। तिम्रो के छ?
आदम: तिमी चकित हुनेछौ, तर मँ सबै भन्दा गणित मन पराउँछु।
जुलिया :: ओह, मलाई गणित मन पर्दैन। यी सबै सूत्रहरू र परिभाषाहरूले मेरो लागि कुनै अर्थ राख्दैन। म सधैं तिनीहरूलाई मिश्रण।
आदम: ठिक छ, म अंग्रेजी बारे पनि यस्तै भन्न सक्छु। म भूतपूर्व साधारण काललाई वर्तमान उत्तमबाट कहिले पनि छुट्याउन सक्दिन र म कसरी बुझ्न सक्दिन भनेर।
जुलिया: तपाईलाई बढी अभ्यासको आवश्यक छ, मलाई लाग्छ।
आदम: मैले प्रयास गरेको छु। मेरा आमाबुवाले मलाई मद्दत गर्न एक शिक्षक पनि भाडामा लिनुभयो, तर त्यसले काम गरेन।
जुलिया: इतिहास कस्तो छ? तपाईंलाई यो मन पर्छ वा छैन?
आदम: म यस विषयमा धेरै रुचि राख्दिन र म प्राय: मिति, तथ्य र काल मिलाउँछु।
जुलिया: अवधिहरू मिलाएर तपाईले के भन्न खोज्नु हुन्छ?
आदम: मेरो भनाइको तात्पर्य, मेरो लागि पुरानो समय मध्यकालीन जत्तिकै हो।
जुलिया: म देख्छु। म कहिलेकाँही मितिहरू पनि बिर्सन्छु र सबै ऐतिहासिक तथ्यहरू सम्झन मलाई गाह्रो लाग्छ, तर मैले हाम्रा इतिहासका शिक्षक एकदम चाखलाग्दो कथावस्तु हो भन्नु पर्दछ। म घण्टौंसम्म उनको कथा सुन्न सक्छु।
आदम: म पूर्ण रूपमा सहमत छु। यो उनको कुरा सुन्न बरु रोचक छ। यस बाहेक, उनी बच्चाहरुको लागि कहिले पनि मतलब हुँदैन।
जुलिया: हो, यो सत्य हो।
आदम: जीवविज्ञानको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
जुलिया: मलाई यो विषय साँच्चिकै मनपर्दछ। यदि म केहि मेडिकल कलेजमा प्रवेश गर्न जाँदैछु भने, म निश्चित रूपले जीव विज्ञानको अध्ययनमा बढी प्रयास गर्ने थिएँ।
आदम: र मलाई लाग्छ कि हाम्रो जीव विज्ञान को शिक्षक अनुचित कडा छ। उनी हाम्रो प्रयासका लागि कहिल्यै प्रशंसा गर्दैनन् र धेरै गृहकार्यहरू नियुक्त गर्दछन्।
जुलिया: यो सत्य हो। उनी धेरै सख्त देखिन्छन्। जे होस्, मलाई लाग्छ उनी बरु निष्पक्ष छन्। उनी केवल हामीले कडा परिश्रम गरेको र उनको विषयमा चासो विकास गर्न चाहन्छ।
आदम: हुनसक्छ, तपाईं सहि हुनुहुन्छ।
जुलिया: म पनि हाम्रो भूगोल शिक्षकको बारेमा भन्न सक्छु। ऊ बरु सख्त पनि छ, तर मलाई उसको पाठमा जान मन पर्छ। भूगोल एक धेरै चाखलाग्दो विषय हो। यसले मलाई यात्रा र विश्व अन्वेषण गर्न चाहन्छ।
आदम: मलाई पनि यो विषय मनपर्दछ। जहाँसम्म, मैले मेरो दोस्रो मनपर्ने विषय छान्नु पर्छ भने, म PE छनौट गर्छु।
जुलिया: यो किनभने तपाईं हाम्रो कक्षाको सर्वश्रेष्ठ बास्केटबल खेलाडी हुनुहुन्छ।
आदम: केवल त्यस कारणले होइन। मलाई लाग्छ PE पाठहरू स्वास्थ्यका लागि राम्रो छन्। यदि हामीले अधिक शारीरिक व्यायाम गर्‍यौं भने हामी सधैं फिट रहनेछौं।
जुलिया: म सहमत छु, तर हामीसँग यी पाठहरू हप्तामा दुई पटक मात्र छन्।
आदम: अर्को विषय जुन मलाई उपयोगी लाग्यो त्यो हो IT हो। कम्प्युटरहरू जान्नु र उनीहरूले चलाउने तरिका आजकल उपयोगी छ।
जुलिया: तपाईं सहि हुनुहुन्छ। कम्प्युटर विज्ञान द्रुत रूपमा विकास गर्दछ।